Urban Terror: lalao Shooter First Person Shooter (FPS) tena tsara ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Androany, hotantaraiko anao ny momba ny a lalao an-tserasera, izay nanomboka nampiasaiko nandritra ny 1 herinandro handaniana ny fotoana fialamboly rehefa avy niasa. Azo antoka fa tsy lalao tsy fantatra na vaovao ao amin'ny Linuxero sehatra, saingy noforoniny fa mendrika hanasongadinana ny ankehitriny sy ny vaovaon'izany. Ary tsy hafa izany Fampihorohoroana an-tanàn-dehibe.
Como Fampihorohoroana an-tanàn-dehibeao amin'ny Linuxero sehatra Misy lalao hafa mitovy amin'izany izay nilalaovako manokana taloha, toy ny Alien Arena, Cube fanafihana, kianja misokatra. Na eo aza izany, na dia efa namaky momba aza Fampihorohoroana an-tanàn-dehibe Tsy mbola nanandrana izany aho ary nahafinaritra ahy tokoa ny zavatra niainako. Ho fanampin'izay, haneho hevitra momba azy io, tsy ho ela dia hisy vaovao mifandraika miaraka amin'ny nandrasana hatry ny ela kinova vaovao 5.
Mazava ho azy fa tamin'ny tranga teo aloha dia efa niresaka kely momba izany isika Fampihorohoroana an-tanàn-dehibeNoho izany, aorian'ny famakiana ity boky ity, izay liana amin'ny fampahalalana bebe kokoa dia afaka mamerina azy io hamenoana izay voalaza eto, satria manazava tsara ny lalao takiana ary ny azy ireo fomba fametrahana, izay tsy niova saika mihintsy. Na izany aza, marihina fa tamin'ny famoahana voalaza io dia nofaritana toy izao manaraka izao:
"Urban Terror dia lalao mpitifitra olona voalohany maimaim-poana. Urban Terror dia mampiasa ny motera ioquake3, ary koa ho famenon'ny Quake III Arena. Ity lalao ity dia mifantoka amin'ny fampifangaroana ny zava-misy amin'ny hetsika mpitifitra haingana toy ny Quake III Arena sy ny Unreal Tournament. Ny zava-misy ao amin'ny mod dia nampidirina tamin'ny alàlan'ny fanovana maro". Urban Terror lalao shooter multiplayer an-tserasera tena tsara.
Azonao atao koa ny mamaky ity lahatsoratra taloha hafa ity Fampihorohoroana an-tanàn-dehibe, miaraka amin'ny fampahalalana mifandraika bebe kokoa momba ny hafa lalao fomba:
Milalao ao amin'ny GNU / Linux: Urban Terror
1 Fampihorohoroana an-tanàn-dehibe: FPS Multiplayer amin'ny Internet
1.1 Inona ny atao hoe fampihorohoroana an-tanàn-dehibe?
1.2 Fanandramana manokana
1.3 Vaovao momba ny fampihorohoroana an-tanàn-dehibe
Fampihorohoroana an-tanàn-dehibe: FPS Multiplayer amin'ny Internet
Inona ny atao hoe fampihorohoroana an-tanàn-dehibe?
Mitanisa ny tranokala ofisialy, Fampihorohoroana an-tanàn-dehibe dia atolotra ho:
"Mpanafika multiplayer maimaimpoana maimaimpoana novolavolain'i FrozenSand, izay hiasa amin'ny motera Quake III Arena mifanaraka aminy. Azo alaina ho an'ny Windows, Linux ary Macintosh. Urban Terror dia azo faritana ho toy ny shooter taktika Hollywood; zavatra mifototra amin'ny realisme, fa ny teny filamatra dia "fahafinaretana noho ny realisme." Izany dia miteraka lalao tsy manam-paharoa, mahafinaritra ary mampiankin-doha.".
Mandritra ny toerana toa Urban Terror Spain, izay a Vondrom-piarahamonina mpampihorohoro ofisialy, voafaritra toy ny:
"NAFanovana ny Quake3, izay taty aoriana dia lasa tsy miankina amin'ny lalao intsony, ka tonga amin'ny fahalalahana tanteraka hilalao azy ary tsy ilaina ny manana ny fahazoan-dàlana QUAKE3 tany am-boalohany noho ny kinova misokatra antsoina hoe ioQuake3. Urban Terror dia miavaka amin'ny maha multiplayer antsoina hoe First Person Shooter (FPS) izay manome fahafinaretana ambonin'ny zava-misy ary manolotra filalaovana amin'ny fomba lalao isan-karazany toa ny malaza indrindra, Mode Bomb, Capture the Flag Mode, Team Mode, Jump Mode, ankoatry ny hafa". Raha mila fanazavana fanampiny dia mankanesa any Discord avy any Urban Terror Spain.
Raha izaho manokana dia tsy mpilalao matetika aho ary ambany amin'ny solosaina, satria hatramin'ny mbola kely dia nisafidy bebe kokoa aho Lalao Console, ary hatramin'ny nampiasako GNU / Linux amin'ny solosaina mandritra ny fotoana feno, ireo fotoana vitsy nanapahako hevitra fa handany fotoana fialamboly hilalaovako CSGO amin'ny alàlan'ny Steam. Na izany aza, ny lalao lalao izay tarihiko eo alohany Fampihorohoroana an-tanàn-dehibe tena nahafinaritra izy ireo. Tsy misy zavatra tokony hitsiriritra ny fahatsapana mahafinaritra sy mahafinaritra amin'ny filalaovana CSGO.
tena Manoro hevitra anao aho ho an'ireo izay maniry fatratra Lalao Shooter, vakio, sintomy ary andramo ny maha-manaitaitra sy mampiankin-doha ny lalao, ary tsy noho ny lalao, fitaovam-piadiana ary sarintanyfa ho an'ny lehibe fiarahamonina manerantany iza no manana, izay mandray anjara sy mandray anjara amin'izany.
Izaho manokana dia afaka nankafy ora tsara vitsivitsy fivoriana ady miaraka amin'ny olon-tsy fantatra mandra-maraina, ary ny hafa mandra-pahatongan'ny sasakalina, miaraka amina vondrona namana tena tsara avy amin'ny Linux Community Terror Server Server antsoina hoe Linuxitos, maro amin'izy ireo no avy Uruguay y Arzantina.
Vaovao momba ny fampihorohoroana an-tanàn-dehibe
Amin'izao fotoana izao, Fampihorohoroana an-tanàn-dehibe misy ao amin'ny 4.3.4 version ao amin'ny fizarana fampidinanaNa izany aza, isan'andro dia akaiky kokoa ny famoahana andrasana Fampihorohoroana an-tanàn-dehibe 5. Izay azo hamarinina amin'ny resaka momba ny kinova 5 ao amin'ny forum-nao ary ireo horonan-tsary momba izany ao aminy Channel YouTube ofisialy. Na izany aza, ity misy horonantsary iray vao 4 volana lasa izay, mba ahitanao kely ny zavatra ho avy.
Mandria, antenaiko ankafizo ny tolo-kevitra, andramo izany ary manaova fotoana fitifirana mahafinaritra, miaraka amin'ny olon-tsy fantatra na olom-pantatrao.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Urban Terror», izay lalao mpitifitra olona voalohany an-tserasera maimaimpoana maimaimpoana; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Urban Terror: lalao Shooter First Person Shooter (FPS) tena tsara ho an'ny Linux
Pyston 2 fampiharana an'i Python miaraka amin'ny mpamorona JIT
Oktobra 2020: Ny tsara, ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software